S/land oo ka wlaaacsan qorshaha ciidan ee DFS | Caasimada Online
Home Warar S/land oo ka wlaaacsan qorshaha ciidan ee DFS
S/land oo ka wlaaacsan qorshaha ciidan ee DFS
Hargeysa (Caasimada Online) – Somaliland ayaa walaac ka muujisay qorshaha Dowladda Turkigu waddo ee la doonayo in dib loogu dhiso ciidamadii cirka ee Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaan-dhigga Somaliland Axmed Cali Cadami ayaa sheegay in xilligan aysan munaasib ahayn in Soomaaliya yeelato ciidamo cirka ah, maadaama arrintaasi tahay mid halisteeda leh – waa sida uu hadalka u dhigaye.
Cadami oo waraysi gaar ah siiyey wargeys Hargeysa kasoo baxa oo lagu magacaabo Dawan, wuxuu intaas raaciyey in Somaliland weli xusuusan tahay waxyeelladdii kasoo gaartey ciidamada cirka ee Soomaaliya.
“Waxan leenahay Dowladda Turkiga, Somaliland dhibkii hore ee kasoo gaadhay ciidanka cirka Soomaaliya mid kale ha ugu darinina…Dowladda Turkiga loogama fadhiyo in ay abaabusho halkii laga soo weerari lahaa Somaliland iyo inta lamid ah” ayuu yiri.
Sanadkii 2011, markaasoo macaluuli ka jirtey qaybo kamid ah gobollada koonfureed ee dalka, ayaa Madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan -oo xilligaas ra’isul wasaare ahaa- iyo xaaskiisu booqasho taariikhi ah ku yimaadeen magaalada Muqdisho.
Laga soo bilaabo waqtigaas, Dowladda Turkiga waxay xoojisey taageerada dhaqaale ee ay siiso Soomaaliya, inkastoo badi wax-qabadkeedu ku kooban yahay magaalada Muqdisho.